My Wonderful January! | The World of Pinkgold
JulyDream on January 19, 2009 at 2:56 am said:
ယောကျာ်းမြန်မြန် ရပါစေကွယ်။ ချစ်သူရပါစေဆို အချိန် ကြာနေအုံးမယ်။ အသက်က ငယ်တော့တာ မဟုတ်ဘူးလေ။ ဒါကြောင့် ဆုကို တဆင့်ကျော် ပေးလိုက်တာပါ။ Jump promotion ပေါ့ကွာ။ ဟဟ…
MgThaJan on January 19, 2009 at 2:59 am said:
စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ချမ်းသာ မှုတွေအမြဲ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ။
သဉ္ဇာ - Thinzar on January 19, 2009 at 3:01 am said:
25 ဆိုတော့ ငွေရတုပေါ့။ ပျော်ရွှင်သောမွေးနေ့ ဖြစ်ပါစေ 🙂
Htoo Tay Zar on January 19, 2009 at 4:07 am said:
၂၅ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ အမ =)
lovelessguiter on January 19, 2009 at 4:39 am said:
မပင်ဂိုးရဲ့ ၂၅ နှစ်မြောက် မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင် အပျိုကြီးဘ၀နဲ့ နိဂုံးမချုပ်ပါစေနဲ့ ဗျား ……။:P
ဟန်သစ်ငြိမ် on January 21, 2009 at 6:03 pm said:
နှစ်ဆယ့်ငါးဆိုပြီး အရှက်များမနေနဲ့ဗျို့…။ လက်ဖက်စား… အဲ… ရတက်ပွားနေရမယ်…။
ကဲ… ဒီတော့… နှစ်ဆယ့်ငါးနဲ့ အခက်မပွားရအောင် အရက်သမား… အဲ… ငတက်ပြား… အဲ… သိတော့ဘူးဗျာ… 🙂
cuttiepinkgold on January 22, 2009 at 6:24 am said:
နှစ်ဆယ့်ငါးမှာ အခက်မပွားရအောင် အိုဘားမားဆီပဲ လိုက်သွားတော့မယ်.. ဟီး
MhawSayar on February 1, 2009 at 5:14 pm said:
၂၅ နှစ်ပြည့်ကနေ နောင်နှစ်ပေါင်း များစွာတိုင် ပျော်ရွင်၊ အောင်မြင်ခြင်း များစွာကို ရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ. မကာရ ရာသီဖွား မပင့်ဂိုးလ်ရေ. (နောက်ကျ ဆုတောင်းပေါ့ဗျာ. 🙂 )